कक्षा ५ मा पढ्ने बालकले आफ्नै महिला प्रिन्सिपलसँग माया बसेर लेखे यस्तो प्रेमपत्र, जस्ले पाए यस्तो सजाए ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/कक्षा ५ मा पढ्ने बालकले आफ्नै महिला प्रिन्सिपलसँग माया बसेर लेखे यस्तो प्रेमपत्र, जस्ले पाए यस्तो सजाए !
सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर भाइरल भएपछि तस्बिरलाई लिएर निकै टिप्पणी भएको छ । अधिकांशले त्यसरी सजाय दिन निर्देशन दिने प्रिन्सिपलको आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रिन्सिपललाई कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् । माया सबैको मनमा हुन्छ । अनि माया गर्नका लागि उमेर वाधक बन्दैन, अनि को कुन हैसियतको भन्ने पनि चिन्दैन ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
किन आ’त्म ’त्या गरे बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले ?